September 2016 - Ceelhuur Online
Duqeynta GAALKACYO waa dagaal gudban!
September 30, 2016 admin1943 Comments on Duqeynta GAALKACYO waa dagaal gudban!
Duqeynta GAALKACYO waa dagaal gudban! Gaalkacyo in ay magaalo dagaal tahay iyo xasarad ugub ma ahan. Weerer iyo rogaalcelin col u joog ah in ay tahayna la ma mooga. In ay labo qabiil, labo maamul iyo labo deegaan u qaybsan tahay sidoo kale. Intaa iyo in ku hoos laaban ee darxumo, daris nacayb, dirir aan […]
September 30, 2016 admin2048 Comments on SAWIRO:Dhaawacyada askartii Galmudug ee duqeyntii mareykanka oo muqdisho loo qaaday
maamulka galmudug ayaa maanta caafimaad ahaan ugu qaaday magaalada muqdisho askartii diyaradaha mareykanka ku duqeeyeen deegaanka jeexdin ee bariga magaalada galkacyo. askartani laqaaday ayaa ahaa kuwo dhaawacyo kala duwan qaba waxaana maanta diyaarad lagasaaray magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug. qaadista askartani ayaa timid kadib markii maanta magaalada galkacyo uu kadegay madaxweyniihii maamulkii hore ee […]
September 30, 2016 admin1736 Comments on DHAGEYSO: Guddi loo saaray Baaritaanka Duqeyntii Gaalkacyo ee Galmudug
Golaha Wasiirada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shalay kulankooda Khamiislaha ahaa Magaalada Muqdisho ku yeeshay ayaa Guddi Wasiiro ah u saaray, si baaritaano dhab ah ay ugu soo sameeyaan Duqeyntii Diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Bariga Gobolka Mudug. Afhayeenka Xukuumada Federaalka Soomaaliya C/casiis Xaaji Cabdi (Goobdoon) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Guddigan Wasiirada ah […]
September 30, 2016 admin1864 Comments on DHAGEYSO: R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya C/wali sheekh oo ka hadlay Howlgalka AMISOM
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed ayaa sheegay in Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ee jooga Soomaaliya ay ku guul dareysteen Sugidda Amniga iyo Nabad ku soo daabulida Soomaaliya. C/wali Sheekh Axmed Maxamed Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in Ciidanka AMISOM Soomaaliya ay ku sugan yihiin mudo ka […]
Biyo yari soo wajahday shacabka ku nool degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe
September 30, 2016 admin2083 Comments on Biyo yari soo wajahday shacabka ku nool degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe
Wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in ay ka jirto biyo yari kadib markii ay cillad gashay qalabka lagu soo saaro biyaha ee ceelka ugu weyn ee degmada Balcad. Biyo yaridan ayaa waxaa ay saameysay inta badan dadka ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Balcad oo isticmaali jirey ceelka […]
Akhriso:Maamulka Galmudug oo warsaxaafadeed kasoo saaray duqeyntii kadhacday Duleedka Galkacyo
September 29, 2016 admin1919 Comments on Akhriso:Maamulka Galmudug oo warsaxaafadeed kasoo saaray duqeyntii kadhacday Duleedka Galkacyo
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta warsaxaafadeed ka soosaartay weerkii shalay ciidamada cirka mareeykanka ay ku weerareen saldhig ciidamada daraawiishta Galmudug ay ku lahaayeen bariga magaalada Galkacyo weerarkaas oo ay ku dhinteen 13 askari , 7 kalana ay ku dhaawacmeen iya doona hal askari aan wali lahayn nololo iyo gaari iyo burbur ku yimid gadiidka ciidanka […]
September 29, 2016 admin1752 Comments on Mareykanka:Waan baareynaa eedeynta Galmudug
Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay duqeyn ay ka geysatay Gobolada Mudug iyo Jubadda Hoose, kaasoo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen Ururka Al-Shabaab. Hase ahaatee duqeyntii ka dhacday duleedka magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa muran weyn dhaliyay, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegayay in Mareykanka uu duqeeyay ciidamo ka tirsan Maamulla Galmudug. Afhayeen u […]
Faah faahin Qarax ka dhacay Degmada Kaaraan
September 29, 2016 admin2127 Comments on Faah faahin Qarax ka dhacay Degmada Kaaraan
Wararka inaga soo gaaraya Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan Qarax khasaare geystay in uu ka dhacay Suuq ku yaalla Degmada Kaaraan, kaas oo lagu magacaabo Suuqa Xirka-dheere. Qaraxan ayaa la sheegay nuuciisa in uu ahaa Miinada Nuuca Dhulka lagu Aaso, waxaana lagu Aasay Maqaaxi ku taalla Suuqaasi, waxaana bartilmaameedka u ahaa […]
Sawirro:Wasiirka Maaliyadda oo daah furay mashruuc sahlaya in si nidaamsan Ciidamada u helaan Mushaarkooda
September 29, 2016 admin1803 Comments on Sawirro:Wasiirka Maaliyadda oo daah furay mashruuc sahlaya in si nidaamsan Ciidamada u helaan Mushaarkooda
Wasiika Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fergeeti ayaa maanta daah furay mashruuca daahfurnaanta maamulka maaliyadda ee dhanka Ciidanka Qaranku oo socon doono mudo laba bilood ah, kaasoo lagu tayeynayo mushaaraadka ciidanka qaranka si ay u helaan xuquuqdooda waqti cayiman.Shirka lagu daah furayey mashruucaan cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Gaashaandhiga Gen; […]
Golaha Wasiirada oo mowqif cad ka istaagay duqeyntii Mareykanka ee Gaalkacyo (Akhriso)
September 29, 2016 admin1922 Comments on Golaha Wasiirada oo mowqif cad ka istaagay duqeyntii Mareykanka ee Gaalkacyo (Akhriso)
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa goor dhow war ka soo saaray duqeyntii Mareykanka uu ku beegsaday Ciidamada Maamulka Galmudug, iyadoo walaac looga muujiyay sheegashada Puntland ee ku aadan duqeynta ka dhacday duleedka Gaalkacyo. War qoraal ah oo ka soo baxay Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Maxamed Cumar Carteh ayaa lagu sheegay go’aan gole oo ku saabsan asnixinta war-muritiyeedka […]